Iyabajivaza abeStellies indawo abakuyo, bafuna ukuvuka ngePirates - Impempe
Iyabajivaza abeStellies indawo abakuyo, bafuna ukuvuka ngePirates
Ukuzithola sebeseduze nezembe esikhundleni sokuba babe semaqenjini abalwa embangweni wesicoco yinto eqwashisa umqeqeshi weStellenbosch FC, uSteve Barker. Leli qembu elisekwe ngezimali yiziqumama zakwaRupert lisendaweni ebucayi njengoba likweka-12.
Iyalingana ngamaphuzu ang-25 neMaritzburg United neTshakhuma Tsha Madzivhandila abangemuva kwayo bese iqhela ngeilodwa kwiChippa United esendaweni ka-15.
UBarker uthi njengoba sekusele imidlalo emine isongwe isizini, sekumele baqale ukulwela ukuqhela ezembeni elilokhu lisina bese libacifela iso.
“Sinemidlalo emine emikhulu esele, kumele sibhekane nayo ngamunye ngoba sesizithole sisesimweni ebesingasihlosile la siseduze khona nezembe okunokuba seduze namaqembu abanga isicoco. Ngakho manje into ebalulekile ukuthi sisuke kule ndawo ngokushesha,” kusho uBarker ngoMsombuluko.
Emdlalweni wokugcina, iStellies ibuye ilambatha eGqeberha la beyibhekene khona neChippa, okuyidonsele emgodini omnyama.
“Saphoxeka ngomphumela walowo mdlalo, kwakuwumdlalo esasazi ukuthi akumele sihlulwe kuwo. Kodwa ibhola linjalo ke, okuhle wukuthi uhlezi unomdlalo olandelayo okwenza usheshe ukhohlwe osudlule,” kuchaza uBarker.
NgoLwesibili uBarker uzobheka ukuthi balungise kulokho uma sebebhekene ne-Orlando Pirates emdlalweni weligi – womabili la maqembu ayawadinga amaphuzu aphelele.
“Sesibheke phambili manje kanti umdlalo ophambi kwethu ngowe-Orlando Pirates ngoLwesibili. Sesikukhombisile ukuthi siyiqembu elikwaziyo ukumelana nanoma yiliphi iqembu kulesi sigaba.
“Sidinga ukukhombisa ukuthi siyakwazi ukumelana nezinselelo sivuke sizithathe, sikhohlwe wukuphoxeka komdlalo odlule. Kumele siqhubeke nokukhombisa ukuzethemba nokukholelwa ekutheni singakwazi ukuzuza izinto.
“Sibhekene nembangi enzima enabadlali abahle kuzo zonke izindawo, kubalulekile nokho ukuthi singalibali ubukhali bethu. Siqhubeke nokuzikhandla sikholwe wukuthi sizowuthola umvuzo ofanele.
“Akusho lutho ukuthi udlala nobani kule ligi, sesike sahlulwa amaqembu angezansi kwethu. Ngakho ukuthi udlala neqembu elingangawe, elingaphezulu noma elingaphansi akwenzi mehluko.”
Previous Previous post: Azophinde ayijibe kwiSundwons ingcindezi AmaZulu
Next Next post: Bazowucazelana abeTshakhuma u-R7-million abawuwine kwiNedbank Cup